छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्थाले २०७४/७५ को नाफाबाट शेयरधनीलाई १८ प्रतिशत बोनस शेयर र २२ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीको भदौ २८ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त प्रस्ताव गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति पाएपछि र कम्पनीको आगामी साधारण सभाबाट पारित भएपछि शेयरधनीले उक्त लाभांश पाउनेछन् । चालू आवको पहिलो त्रैमासमा कम्पनीले रू. १५ करोड ६१ लाख नाफा कमाएको छ ।
यो नाफा गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ९३ प्रतिशत बढी हो । कम्पनीले गत आवको पहिलो त्रैमासमा रू. ८ करोड ६ लाख नाफा कमाएको थियो । पहिलो त्रैमासमा कम्पनीको खुद ब्याज आम्दानी र सञ्चालन नाफा बढेकाले नाफामा वृद्धि भएको हो । रू. १ अर्ब चुक्तापूँजी रहेको कम्पनीले रिजर्भ कोषमा रू. १ अर्ब ३२ करोड छुट्याएको छ । कम्पनीले ६७ ओटा जिल्लामा १ सय ३४ ओटा शाखा कार्यालयमार्फत सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । वित्तीय पहुँच नपुगेका देशका पूर्व र पश्चिमतर्फका २१ ओटा जिल्लाका अतिविकट क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले कम्पनीले ७८ ओटा डिजिटल प्वाइन्टको स्थापना गरेको छ ।
2019-01-03 - 167 view(s) - abhiyan